BFS oo Maanta La Horgeynayo Warbixinta Kiiska Qalbi Dhagax? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA BFS oo Maanta La Horgeynayo Warbixinta Kiiska Qalbi Dhagax?
BFS oo Maanta La Horgeynayo Warbixinta Kiiska Qalbi Dhagax?
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya xarunta Golaha Shacabka ee Magaaladda Muqdisho.
Kulanka Baarlamaanka ayaa maanta lagu wadaa in ay war-bixin dhamaystirsan ku soo bandhigaan Guddigii loo xil saaray kiiska Jen. C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax) oo ah Sarkaal ka tirsan Jamhada ONLF ee dhulka Soomaali galbeed oo Dowladda Soomaaliya ay u gacan galisay Itoobiya.
Xubnaha Guddiga oo horey Waqti dheeraad ah ku darsaday baarista Kiiska dhiibitaankii Qalbi-dhagax ayaa maanta waxaa laga Sugayaa war-bixin dhameystiran oo ku aadan sababtii Madaxda Dowlada ay Itoobiya ugu gacan galiyeen iyo jiritaan Heshiis la Sheegay Dowladdii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay u gashay kaasi oo dhigaya in Xubnaha ONLF loo gacan galiyo Itoobiya.
C/risaaq Cumar Maxamed gudmoomiye ku-xigeenka Guddiga oo horey u soo noday Wasiirkii Amniga Gudaha ayaa sheegay in ay hayaan war-bixin dhameystiran taasi oo ay baarlamaanka la wadaagi doonaan inkastoo uu ka gaabsaday in faahfaahin ka bixiyo sida ay u qeexeyso Kiiska C/kariin Sheekh Muuse.
Warbixinta Guddiga Kiiska Qalbidhagax ayaa maanta kusoo beegantay xili Xasaarad xoogan ay ka dhex-taagan tahay Xildhibaanada Golaha Shacabka oo labo garab u kala Jaban Islamarkaana kala taageersan Mooshin laga wado madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari.
Warar aan helney ayaa Sheegaya in Xildhibaano ka soo horjeeda in Kulan Baarlamaanka la Keeno Kiiska Qalbidhagax Taageersan Goaankii Dowladda inay Diyaariyeen Mooshin Xilka looga qaadayo Gudoomiye Jawaari oo horey u magacaabay Guddiga Baaritaan arinta Sarkaalkaasi
Dhankale Xildhibaano Taageersan dooda Kiiska Qalbidhagax ayaa si la mid ah diyaariyey Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo asaga iyo Xukumada la aaminsan yahay inay talo ku dhiibeen Jen. C/kariin Sheekh Muuse.
Madaxda Dowladda Soomaaliya ayaa C/Kariin Sheekh Muuse (Qalbi-Dhagax) ku wareejisay Dowladda Itoobiya 27-kii Bishii August ee sanadkan, waxaana taasi ay Sababtay muran xoogan iyo khilaaf oo soo kala dhex-galay Madaxda Dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.